Xalka: avrdude: ser_open (): ma furi karo aaladda Arduino - Ikkaro
Inicio >> Arduino >> Xalka: avrdude: ser_open (): ma furi karo aaladda Arduino
Maqaalkan waxaan ku sharaxayaa sida loo saxo qaladka guud ee Arduino:
avrdude: ser_open (): ma furi karo aaladda "/ dev / ttyACM0": Ogolaanshaha waa la diiday
Waqti dheer kadib anigoon isticmaalin Arduino waxaan qaatay labadayda loox (kan asalka iyo kan Elegoo) si aan waxqabad ula sameeyo gabadhayda. Waan isku xirayaa iyaga, waxaan galin doonaa indhashareerka si aan u arko in wax waliba hagaagsan yihiin markaan tago si aan ugu diro guddiga wuxuu soo celiyaa qaladkii caanka ahaa.
Arduino: 1.8.5 (Linux), Kaadh: "Arduino / Genuino Uno" avrdude: ser_open (): ma furi karo aaladda "/ dev / ttyACM0": Ogolaanshaha waa loo diiday Dhibaatada u soo rarida guddiga. Booqo http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload wixii talo bixin ah.
PC-ga iyo laptop-kayga labadaba waxaan ku rakibay Ubuntu 18.04.
Waxaan ku bilaabayaa anigoo raacaya kuwan isku xidho inaad ii soo jeediso. Aniguna waxaan raacayaa tillaabooyinka
En qalab / saxan Arduino / Genuino Uno ayaa la xushay
En qalab / dekedda taxanaha ah / dev / ttyACM0
iyo sida dukumiintiyada ay soo jeedinayaan, haddii ay dhibaatooyin ka dhacaan darawallada iyo rukhsadaha, waxaan furayaa xarunta oo aan fuliyaa:
halkaa yourUserName waa magacaaga isticmaale
Hadda waan baxaa oo mar kale ayaan soo galaa. Haddiise aan dib u bilaabo PC / laptop-ka.
Wali aniga ima shaqeyso aniga iyo dukumintiyada Arduino mar dambe ma caawinayso. Marka waan sii waday raadinta, goobaha iyo baloogyada. Haddii markan ay kuu shaqeysan weydo oo aad aniga ila mid tahay. Raac talaabooyinka xiga
ls / dev / ttyACM0 celinta / dev / ttyACM0
ls -l / dev / ttyACM0 waxay soo celisaa crw-rw-- 1 wadahadalka xididka 166, 0 Nofeembar 26 16:41 / dev / ttyACM
Tan waxaan ku xaqiijinaynaa inay dekeddu jirto
Waxaan bixin doonnaa rukhsad oo aan hubin doonaa haddii isticmaaleyaasheena ay leeyihiin rukhsadaha lagama maarmaanka ah.
Waxaanan arkaa in isticmaalaha uu ku dhex jiro kooxda wada hadalka marka qaybtaan waan saxnay.
Wixii aniga ii shaqeeyay waxay ahayd inaan dib u rakibo Arduino.
Mana soo celinayso wax dib u dhisid Arduino waa in la hagaajiyaa.
Hadana hadaadan awoodin inaad xalliso dhibaatada, ii dhaaf faallo waxaanan isku dayi doonaa inaan ku caawiyo.
AVRDUDE Qalabaynta Dhibaatada
Waxaa jira a qoraal ay diyaariyeen si ay u xalliyaan dhibaatadan. Waxaad isku dayi kartaa inaad aragto inay ku caawinayso iyo in kale. Ma aanan isticmaalin laakiin waan ka tagay sababtoo ah waxaan u maleynayaa inay noqon karto ilo waxtar leh.
Waxaan ka tagayaa xoogaa macluumaad ah si aan sifiican ugu fahmo waxa AVRDUDE yahay. Magaca ayaa ka yimid AVRDUDE - AVR Downloader / UploaDEr
AVRDUDE waa adeeg ay ku soo dejiso / ku shubato / ku maareyso waxyaabaha ku jira ROM iyo EEPROM ee ku jira AVR microcontrollers iyadoo la adeegsanayo farsamada barnaamijka (ISP).
AVRDUDE waxaa bilaabay Brian S. Dean oo ah mashruuc gaar loo leeyahay oo ah barnaamij barnaamij loogu talagalay taxanaha Atmel AVR ee microcontrollers.
Waxaad ka heli kartaa barnaamijka softiweerka iyo macluumaad intaa ka badan websaydhka mashruuca.
1 faallo ka bixiya "Xalka: avrdude: ser_open (): ma furi karo aaladda Arduino"
Abriil 1, 2020 markay ahayd 1:02 am
Dhibaato ayaan ku qabaa arduino midkoodna kuma xiriiro fikirka ama dhanka kale waxaan haystaa wax kasta oo si fiican loo qaabeeyey, dhammaan saxanka dekeda iwm ... waan soo dejiyey flip laakiin ma aqaano sida ay u shaqeyso dib u soo cusbooneysiinta qalabka aan u maleynayo inuu yahay maxaa qaldan, waxaad kaheli laheyd waxyar oo faahfaahsan sida dib loogu rakibo arduino mahadsanid waan kucusub ahay tan
3 AVRDUDE Qalabaynta Dhibaatada
4 KA QAADO